२०२० शीर्ष गोल्डन फेस्टिवल प्रारम्भिक पुरुष र महिलाको फेसन, कपडा र जुत्ता व्यापार, शीर्ष कोट, स्नीकर्स, सनग्लास र कपडा, जुत्ता र अन्य सामानहरूमा थप छुट सहित अमेजन प्राइम डेमा सर्वश्रेष्ठ प्रारम्भिक फेसन, कपडा र जुत्ता सौदाहरू फेला पार्नुहोस्, जसमा धेरै ...
"ग्लोबल स्पोर्ट्स साइकल आईवेयर मार्केट" रिपोर्टले उद्योगको स्थितिमा प्रमुख तथ्या .्क प्रदान गर्दछ र बजारमा रुचि राख्ने कम्पनीहरू र व्यक्तिहरूको लागि मार्गनिर्देशन र मार्गदर्शनको मूल्यवान स्रोत हो। खेल बाइक चश्मा बजारमा अनुसन्धान रिपोर्टमा ड्राइभि includes समावेश छ ...
कस्तो प्रकारको सनग्लास तपाई भविष्यमा लगाउन चाहानुहुन्छ?
एक पटक, हामी सबैले चश्मा लगाएका ठूला केटीहरू डरलाग्दो महसुस गरिरहेको महसुस गर्‍यौं, सुस्त र हँसीको अभाव महसुस गरें। यद्यपि, भर्खरका वर्षहरूमा धेरै ठूला फ्लाईओभर ब्रान्डले उनीहरूलाई समर्थन गरेको छ, र सबैले मन नपराउने चश्मा अचानक फेसन आईटमहरू भयो र ने बन्यो ...
धूप चश्मा सडक मा एक आवश्यकताहरु भएको छ। के तपाइँ अझै पनी परम्परागत राउन्ड र वर्ग चश्मा छान्नुहुन्छ? सडकमा यात्रा गर्दा, आँखा सुरक्षा आइटम सनग्लास हो। हालसालै, अनियमित फ्रेमहरूको फेसन एक्सेसरीजमा उद्योगमा चुपचाप उडाइएको छ। यो ...
लोकप्रिय धारणामा, सनग्लासहरू "गर्मीका सहायक" हुन्, तर के तपाईंलाई थाहा थियो?
लोकप्रिय धारणामा, सनग्लास "गर्मीका सहायक" हुन्, तर के तपाईंलाई थाहा थियो? जाडोमा अल्ट्राभायोलेट किरण आँखाका लागि पनि हानिकारक हुन्छ। बादल दिन मा पनि, UVA र UVB अझै पनी तपाइँको आँखा सम्म पुग्नेछ। वास्तवमा हिउँदमा हाम्रो आँखा अधिक नाजुक र नाजुक हुन्छ। एकातिर, ख ...
सनग्लाससँग पनि "शेल्फ लाइफ" हुन्छ
२०-०8-०5 मा व्यवस्थापक द्वारा
सनग्लासको उपयुक्त जोडी छान्नका लागि, निम्न आधारभूत सुझावहरू दिमागमा राख्नुपर्दछ: यूवी सुरक्षा: धूपको चश्मा छनौट गर्नुहोस् जुन% 99% ~ १००% UVA र UVB विकिरण रोक्न सक्छ। सनग्लास साइज: ठूलो साइजको सनग्लासहरू किन्नुहोस्। धेरै आकारको धूपको चश्माले विस्तृत दायरा कभर गर्दछ र कम गर्न मद्दत गर्दछ ...
सनग्लास, सूर्य-छायांकन चश्मा को एक प्रकार को रूप मा, मानव शरीर को सुरक्षा उत्पादनहरु को लागी। सनग्लासको मुख्य कार्य भनेको मानव आँखाहरूमा बाह्य अल्ट्राभायोलेट किरणहरूले गर्दा हुने जलन र क्षति रोक्न र आरामदायी दृश्य वातावरण प्रदान गर्नु हो। उचित सुरक्षा बिना ...